Thenga ama-cuttings | Oda izitshalo zasendlini ezingavamile futhi eziyingqayizivele - Incwadi ye-Cuttings
Ukunikezwa koSuku Lomama lwango-2022
Izitshalo zasendlini ezingavamile
Izitshalo zengadi ye-Terrarium nebhodlela
Ukusikwa kwamahhala nezitshalo
ama-geraniums anephunga elimnandi
I-Geraniums eqondile zonal
Isikhala: Umpakishi, isikhethi se-oda
Izipho zokukhangisa zangempela
Amathiphu angu-5 lapho ama-cuttings akho efika ekusikeni kwakho
I-Alocasia: izitshalo zasendlini ezinhle nezingavamile
Ukutshala kabusha izitshalo zasendlini
Izitshalo zasendlini ezi-5 ezilula
Izitshalo zasendlini ezinomthunzi
izitshalo zasendlini ezinkulu
Ngidinga ibhodwe elingakanani lembali?
Izitshalo ezi-5 ezilula zasendlini
Amathrendi ayi-10 aphezulu wezitshalo zasendlini
Amathiphu ayi-10 okunakekela izitshalo zasendlini
Izitshalo zasendlini eziyi-10 ezilungele izingane
Ukuthambekela kwezitshalo zasendlini
Ukunakekelwa okungcono kakhulu kwezitshalo zasendlini
Izimbungulu ezitshalweni zami zasendlini!
I-Philodendron - imvelaphi nokunakekelwa
i-coconut fiber; inhlabathi ekahle yokuhlwanyela, ukusika nokugawula
Amathiphu kaDisemba - uhlelo lukaKhisimusi
Isihlahla sikaKhisimusi siphumile, isitshalo sasendlini ngo-2021
Usizo! Amaqabunga aphuzi ezitshalweni zami zasendlini
Ingabe uyikhasimende noma umlimi?
I-Newsletter Cutting Letter
Izinguqulo zakamuva ze-Cutting Letter
Izitshalo zasendlini zenyanga
Uhlu lwami lwesifiso
I-Monstera Variegata encane yokusika
Ingabe uzobhekana nenselele ngokusika okunganqamuki okungajwayelekile? †
I-Monstera Variegata - Mi Amigo!
Ngiyabonga, ngiyabonga ngokuhlanganyela!
I-Syngonium Albo cishe. ukusika
Isipho esihle sakho noma isithandwa sakho? †
Ukusika kwe-Monstera Pinnati partita
Mangaza umngane wakho ngalolu suku lweValentine nge-MP yethu
I-Monstera Variegata - Ukusika abasha!
Daredevil kule nselele yasemadolobheni eluhlaza!?
Yebo, ngiyalokotha, mgcine ephila! †
U-Senor Philodendron Cobraah :-)
I-Philodendron Cobra iyisitshalo esingavamile kakhulu futhi esikhethekile ngenxa yamaqabunga ayo akhethekile anemibala ehlukahlukene.
Philodendron Burle Marx Variegata ukusika okungagxiliwe
I-Philodendron Burle Marx Variegata i-Philodendron eyivelakancane enamaqabunga amahle ahlukahlukene.
I-Pilea Peperomioides Mojito
Ingabe ufuna ngempela ukwenza umkakho noma intombi yakho ijabule ngePilea Mojito?
Ukusika ku-sphagnum moss
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa ku-sphagnum moss kwabaqalayo
Imephu yomgwaqoThenga i-sphagnum moss engenamagciwane
Isimanga akufanele sibize kakhulu ngathi
Ngoba akukho okujabulisa ukwedlula ukumangala nje!
Ibhokisi lokusika elimangalisayo elinezimpande ezi-5 zama-pcsIbhokisi lokusika elimangalisayo elingagxiliwe ama-4 ama-pcs
Isipho sebhizinisi esimeme?
Siyabonga ozakwenu abathandekayo ngomsebenzi wethu oluhlaza ovela kuzipho zasekhaya!
Ibhokisi lokusika elimangalisayoUlwazi oluningi?
Umangaze umngane wakho omkhulu?
Mthumelele i-Hoya Kerri Double Hearts enekhadi lokubingelela!
Hoya Kerry Izinhliziyo Ezimbiliikhadi lokubingelela
Kusuka ku-plant lover e-Australia ukutshala umqoqi eNetherlands
Kwenze kube yihlathi elihle lasemadolobheni!
Thola zonke izitshalo zamaphupho akho ngebhokisi lakho lezincwadi!
AMACEBISO ESIPHO: UMAMA
Ungamangaza kanjani umama ekhaya noma ukude ngendlela yokuqala?
ibhokisi lokumangalaIbhodwe legumbi elibomvu laphakama
I-Cutting mix yawo wonke ama-cuttings akho
Sebenzisa le premium yokusika ukuze unikeze ingane yakho isiqalo esihle sokukhula.
10 L iPerlite yokusikwa kwakho
Qala uhambo lwakho lokusika nge-perlite!
Ukusika okunezimpande ze-Anthurium Crystallinum
Ngiyabonga, ngiyayithanda i-Anthurium Crystallinium!
Ubuzile, futhi salalela :)
9 x Izitshalo eziluhlaza njengezipho zoSuku Lwezithandani zakhe
Ukusikwa kwethu okudumile nezitshalo ngokulandelana
Ukuthunyelwa kwamahhala kuma-oda angaphezu kuka-€94,95 [NL]
Kuyeza maduze, izitshalo zasendlini
Ukuthenga nokunakekela i-Alocasia Frydek Variegata
I-Alocasia Frydek Variegata iyisitshalo sasendlini esingandile futhi esihle. Inothile okuluhlaza okumnyama okujulile, okuhlukahlukene okufana ne-sectoral kanye ne-splash, kanye namahlamvu ayi-velvety amise okwenhliziyo emincane anemithambo emhlophe ehlukile. Ubude be-petioles buncike ekutheni unikeza ukukhanya okungakanani noma okuncane isitshalo sakho. Kudingeka ukukhanya ukuze kugcinwe imithunzi.
I-Alocasia iyawathanda amanzi futhi ithanda ukukhanya ...
Thenga i-Philodendron Melanochrysum
I-Philodendron melanochrysum iyinhlobo yezitshalo eziqhakazayo zomndeni wakwa-Araceae. Le Philodendron ekhethekile futhi ehlaba umxhwele ayitholakali kakhulu futhi yaziwa nangokuthi Igolide Elimnyama.
Thenga i-Philodendron Melanochrysum ukusikwa okungagxiliwe
Izipesheli, izitshalo zasendlini
Thenga i-Syngonium Red Spot Tricolor cuttings
Beka isitshalo endaweni ekhanyayo, kodwa hhayi elangeni eliqondile. Uma isitshalo simnyama kakhulu, amaqabunga azoba luhlaza.
Gcina inhlabathi imanzi kancane; ungavumeli inhlabathi yome. Kungcono ukunisela amanani amancane njalo kunokunisela kakhulu ngesikhathi. Iqabunga eliphuzi lisho ukuthi kunikezwa amanzi amaningi.
I-Pixie ithanda ukufafaza ehlobo!
Thenga iMonstera adansonii variegata - ibhodwe elingu-12 cm
I-Monstera adansonii variegata, eyaziwa nangokuthi 'isitshalo sembobo' noma 'i-philodendron monkey mask' variegata, isitshalo esiyivelakancane nesikhethekile ngenxa yamaqabunga ayo akhethekile anezimbobo. Lesi sitshalo naso sikweleta isiteketiso saso. Ekuqaleni i-Monstera obliqua ikhula emahlathini ashisayo aseNingizimu naseMelika Ephakathi.
Beka isitshalo endaweni efudumele nekhanyayo futhi...
Izipesheli, Izidili zangoLwesihlanu Olumnyama 2022
I-Monstera obliqua adansonii variegata - ukusika ikhanda elingagxiliwe
I-Monstera obliqua variegata, eyaziwa nangokuthi 'isitshalo sembobo' noma 'i-philodendron monkey mask' variegata, isitshalo esiyivelakancane nesikhethekile ngenxa yamaqabunga ayo akhethekile anezimbobo. Lesi sitshalo naso sikweleta isiteketiso saso. Ekuqaleni i-Monstera obliqua ikhula emahlathini ashisayo aseNingizimu naseMelika Ephakathi.
Thenga iMonstera adansonii variegated - ibhodwe elingu-13 cm
I-Monstera adansonii variegata - thenga ama-cuttings angahlutshiwe
I-Monstera Dubia ithenga futhi inakekele ukusikwa okungagxiliwe
I-Monstera dubia iyinhlobonhlobo engavamile, eyaziwa kancane ye-Monstera kune-Monstera deliciosa evamile noma i-Monstera adansonii, kodwa ukuhlukahluka kwayo okuhle nomkhuba othakazelisayo kuyenza ibe isengezo esihle kunoma iyiphi iqoqo lezitshalo zasendlini.
Endaweni yayo yendabuko ye-tropical Central naseNingizimu Melika, iMonstera dubia iwumvini onwabuzelayo okhwela izihlahla nezitshalo ezinkulu. Izitshalo ezisencane zibonakala ngokuthi...
I-Monstera albo borsgiana variegata - thenga ama-cuttings amancane
De I-Monstera Variegata ngokungangabazeki isitshalo esithandwa kakhulu ngo-2021. Ngenxa yokuthandwa kwayo, abalimi abakwazi ukuhambisana nesidingo. Amaqabunga amahle eMonstera awagcini nje ngokuhlobisa, kodwa futhi isitshalo sokuhlanza umoya. E-China, i-Monstera ifanekisela ukuphila isikhathi eside. Lesi sitshalo kulula ukusinakekela futhi singatshalwa ...
izitshalo zasendlini, izitshalo ezincane
Thenga i-Syngonium Podophyllum Albo Variegata
Izipesheli, Kuyeza maduze
Thenga futhi unakekele i-Syngonium Red Spot Tricolor
Thenga futhi unakekele ukusikwa kweSyngonium Green Splash
I-syngonium ithanda ukufafaza ehlobo!
I-Monstera adansonii laniata ukusikwa okungagxiliwe kuyathengiswa
I-Monstera adansonii laniata cut unrooted, eyaziwa nangokuthi 'isitshalo sembobo' noma 'i-philodendron monkey mask', ikhethekile. isitshalo ngenxa yamaqabunga ayo akhethekile anezimbobo. Lesi sitshalo naso sikweleta isiteketiso saso. Ekuqaleni i-Monstera adansonii laniata ikhula emahlathini ashisayo INingizimu neMelika Ephakathi.
Beka isitshalo endaweni efudumele nekhanyayo...
I-Monstera albo borsigiana variegata - ukusika kwekhanda elinezimpande
De I-Monstera Variegata ngokungangabazeki isitshalo esithandwa kakhulu ngo-2019. Ngenxa yokuthandwa kwayo, abalimi abakwazi ukuhambisana nesidingo. Amaqabunga amahle eMonstera i-philodendron akuzona nje zokuhlobisa kuphela kodwa futhi iyisitshalo esihlanza umoya. Ku China iMonstera ifanekisela impilo ende. Isitshalo kulula ukusinakekela...
Thenga i-Syngonium Albo variegata semimoon ukusika okungagxiliwe
I-Syngonium Podophyllum Albomarginata ukusika okungagxiliwe
I-Syngonium Podophyllum Albo Variegata yokusika ikhanda engagxilile
I-Monstera albo borsigiana variegata - ukusika okunezimpande
I-Monstera albo borsigiana variegata - ukusika abasha
De I-Monstera Variegata ngokungangabazeki isitshalo esithandwa kakhulu ngo-2021. Ngenxa yokuthandwa kwayo, abalimi abakwazi ukuhambisana nesidingo. Amaqabunga amahle eMonstera i-philodendron akuzona nje zokuhlobisa kuphela kodwa futhi iyisitshalo esihlanza umoya. Ku China iMonstera ifanekisela impilo ende. Isitshalo kulula ukusinakekela...
Thenga futhi unakekele iSyngonium Green Splash
Thenga i-Rhapidophora tetrasperma minima variegata cuttings
Ngemuva kwempi yokubhida esizeni sendali saseNew Zealand, othile uthenge lesi sitshalo sasendlini esinamaqabunga ayi-9 kuphela ngerekhodi elingu-$19.297. Isitshalo se-Rhaphidophora Tetrasperma Variegata esiyivelakancane esiyivelakancane esimhlophe, esibizwa nangokuthi i-Monstera Minima variegata, sisanda kuthengiswa endalini eku-inthanethi. Ilethe i-$19.297 epholile, okuyenza ibe “isitshalo sasendlini esibiza kakhulu esake saba khona” kuwebhusayithi yokuthengisa yomphakathi. uhwebo...
Thenga i-Syngonium Red Heart ukusikwa okungagxiliwe
Thenga futhi unakekele i-Syngonium strawberry ice cuttings
Thenga i-Syngonium Pink Splash yokusikwa engagxilile
Ukusikwa kwamahhala nezitshalo, izitshalo zasendlini
Isitshalo somunwe - thenga i-Fatsia japonica eyisikiwe enezimpande
I-Finger Plant yaziwa nangokuthi i-Fatsia Japonica futhi njengoba igama selivele libonisa, lesi sitshalo sisuka emahlathini angavamile aseJapane. Ngenxa yokuthi amaqabunga anesimo sezandla ngeminwe, igama lesiDashi alikhethiwe. I-Finger Plant iyingxenye yomndeni we-ivy futhi kulula uku ...
I-Fittonia Bubble Red - Isitshalo sikaMose
Isitshalo sikaMose (I-Fittonia) isitshalo esikhula kancane esivela kuso INingizimu Melika (Peru)† 'Encane, kodwa enesibindi' uFittonia angabizwa ngokuqinisekile. Kusukela yethulwa ekwindla ka-2007, sekuthengiswe amayunithi angaphezu kuka-100.000. It isitshalo se-mosaic, njengoba ibizwa nangokuthi i-Fittonia, iphakama cishe ngamasentimitha amahlanu ngaphezu komphetho webhodwe. Kodwa ngokusobala uyazi...
Izidili zangoLwesihlanu Olumnyama 2022, izitshalo zasendlini
I-Fittonia albivensis Mosaic Plant Amaqabunga Abomvu
Isitshalo sikaMose (I-Fittonia) isitshalo esikhula kancane esivela kuso INingizimu Melika (Peru)† 'Encane, kodwa enesibindi' ngokuqinisekile ingabizwa ngokuthi i-Fittonia Mosaic Kings Cross. Kusukela yethulwa ekwindla ka-2007, sekuthengiswe amayunithi angaphezu kuka-100.000. It isitshalo se-mosaic, njengoba ibizwa nangokuthi i-Fittonia, iphakama cishe ngamasentimitha amahlanu ngaphezu komphetho webhodwe. Kodwa ngokusobala...
Ngifuna ukwazi ngezipiliyoni zamanye amakhasimende ethu
Isevisi ephezulu kanye nokulethwa okusheshayo
[EN] Ukuthunyelwa okusheshayo, nezitshalo ezinhle, ezinempilo! Naphezu kokuthi bahlala ePostNL impelasonto yonke, babebukeka bebahle, bepakishwe kahle futhi umhlabathi wawuswakeme kahle. Kunconyiwe!
Izitshalo ziyamangalisa futhi zinakekelwa kahle
[YIBA] I-oda lami lokuqala elethwa e-Belgium ezinsukwini ezimbalwa nje. Kupakishwe kahle kakhulu, ama-cuttings nezitshalo aphuma ebhokisini alimale. Kufanelekile ukuphinda, ngiyabonga!
Ngincoma nakanjani Ukusika Incwadi!
Ukulethwa okusheshayo kwasebusika kuhlanganisa ne-heatpack eya e-Italy
[IT] Ngi-ode izitshalo zami e-Italy ebusika, izitshalo zifike ngokushesha futhi zipakishwe kahle kuhlanganisa nokushisa kwephakethe! Izintengo ezinhle kakhulu kanye nokusabela okusheshayo okuvela kusevisi yamakhasimende. Ngincoma ngempela lesi sitolo!
Zonke izitshalo zami zafika ngokuphepha eJalimane
[DE] Zonke izitshalo zami zasendlini zafika zigcwele kahle ngisho nangemva kokubambezeleka kwezinsuku ezi-4 ekuhlungeni kwe-PostNL kanye nezinsuku ezi-4 eJalimane Isevisi yeposi. Siyabonga kakhulu ngokupakisha kwakho okuhle kanye nenkonzo enhle yokulandelela!
Siyabonga kakhulu ngokuthunyelwa ngokushesha e-France
[FR] Ngingakuqinisekisa ukuthi ngithole i-Philodendron Pink Princess ngaphandle kwezinkinga. Siyabonga kakhulu ngalokhu kuthunyelwa okusheshayo okuya e-France!
Ngingayincoma kakhulu i-SB!
Igcwele kahle impela e-Austria
[AU] Izitshalo zifike kimi ziphephile, futhi iphakheji igcwele kahle futhi nezitshalo zisesimweni esihle ngempela! Ngiyabonga kakhulu ngakho konke! Futhi ngizofaka i-oda lami ngo-100% futhi kwelakho!
Sithumela incwadi yakwaStekjes (Izindaba) kanye ngenyanga :-)
Ikheli le-imeyili: Ngifundile futhi ngiyavumelana nemigomo nemibandela
Nawa amabhulogi ethu akamuva
Ukumboza inhlabathi kanye nesembozo senhlabathi
Isetshenziswa Kanjani I-Perlite Ukuze Uthuthukise Inhlabathi Futhi Ukhuthaze Ukukhula Kwezitshalo
Iyini i-perlite? "Umoya womhlabathi" yilokho okushiwo, futhi kuyindlela yesibili engcono kakhulu yokwenza umquba nokuthuthukisa isakhiwo senhlabathi. Thola amathiphu asebenzayo wokuthi ungasebenzisa kanjani i-perlite ngempumelelo engadini yakho.
5 Amathiphu Okuthi Lapho Ukusikwa Kwakho Kufika Ekusikeni Kwakho Cishe uyazi, ukusikwa kwakho sekusekhaya ngemuva kohambo olude. Ubanika ibhodwe, ubanika a Funda kabanzi…
Usizo! Amaqabunga aphuzi ezitshalweni zami zasendlini Ujabulela izitshalo zakho zasendlini eziluhlaza ngokugcwele, kodwa emva kwalokho… kungazelelwe ubona amaqabunga aphuzi! Kusho ukuthini lokhu futhi ungenzani ngakho? Kungaba yizimbangela eziningana Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa ekuxubeni kwe-perlite ne-sphagnum moss
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa kwingxube ye-perlite ne-sphagnum moss. Kuzwakala kulula kakhulu, futhi uma ulandela izinyathelo ezifanele futhi unempahla efanele. Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: Ungasindisa kanjani ukusika kwe-monstera variegata ekuboleni kwezimpande
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: Ukulondoloza ukusika kusuka ekuboleni kwezimpande Kungase kwenzeke: usuka e-monstera variegata enhle yokusika enezimpande ezivulekile, ukuya eqabungeni elidabukisayo elinezinsalela zempande emincane emasontweni ambalwa. Ukungajabuli kakhulu nge Funda kabanzi…
Konke odinga ukukwazi mayelana nokutshala ama-strawberries
Konke odinga ukukwazi mayelana nokutshala ama-strawberries Ehlobo sekuzofika! Futhi ubani ongawathandi ama-strawberry ehlobo. Okungcono nakakhulu, abangazithandi ezintsha zabo Funda kabanzi…
Ngidinga ibhodwe elingakanani lezimbali ezitshalweni zami zasendlini?
Ngidinga ibhodwe elingakanani lezimbali ezitshalweni zami zasendlini? Lapho uthenga izitshalo, kubalulekile ukuthi uthenge imbiza yezimbali efanele ehambisana nohlobo lwesitshalo osithengile. Kufanelekile Funda kabanzi…
5 Amathiphu: SOS, isitshalo sami sisebunzimeni!
5 Amathiphu: SOS, isitshalo sami sisebunzimeni! Uyakubona lokho? Uhamba ngokuthula udlula isitshalo sakho, ubheka emuva, futhi kungazelelwe BAM! Uzihlalele engathi useyilahlile impilo. Mhlawumbe ukungabaza Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa ku-perlite kwabaqalayo
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa ku-perlite kwabaqalayo Ukusikwa kwezitshalo. Kuzwakala kulula kakhulu, futhi uma ulandela izinyathelo ezifanele futhi unempahla efanele. Kulesi sihloko siyachaza Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: Izitshalo zasendlini zokufaka umoya emoyeni iPhilodendron Verrucosum
Uhlelo lwesinyathelo nesinyathelo: Izitshalo zasendlini ze-philodendron ezifakwe emoyeni Ukuba nezitshalo zasendlini ekhaya lakho kuyindlela enhle yokuletha imvelo ethile ekhaya lakho. Kwesinye isikhathi zingaba zikhule, kodwa lokhu akusho ukuthi ungazithola ngokushesha Funda kabanzi…
Izinambuzane Izitshalo zasendlini
Izinambuzane Ingxenye 2: I-Caplice nezimpukane
Izinambuzane Ingxenye 2: Amathambo nezimpukane Uhlu lokuqukethwe Izintwala Zomiyane Zisakazwa: izilwane ezifuywayo, umoya, izingubo, izinyoni nezinambuzaneUmonakaloSuka nakho!Impukane emhlophe Isakazwa: izimpukaneUmonakaloSuka nayo!Ukuvimbela kungcono kunokwelapha Izintwala Zomiyane Zisakazwa: izilwane ezifuywayo, umoya, izingubo, izinyoni Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa ku-sphagnum moss kwabaqalayo Ukusikwa kwezitshalo. Kuzwakala kulula kakhulu, futhi uma ulandela izinyathelo ezifanele futhi unempahla efanele. Faka kulesi sihloko Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: Ukusikwa emanzini kwabaqalayo
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: ukusikwa emanzini kwabaqalayo Ukusikwa kwezitshalo. Kuzwakala kulula kakhulu, futhi uma ulandela izinyathelo ezifanele futhi unempahla efanele. Faka kulesi sihloko Funda kabanzi…
Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo: Ukusika ebhokisini lokusakazeka kwabaqalayo
Ukusikwa “ebhokisini lokusakaza” kwabaqalayo Izitshalo eziningi zasendlini zivela endaweni eshisayo futhi zenza kangcono uma zisendaweni efanayo ekhaya. Lokhu ngokuvamile kusho umswakama ophezulu kanye Funda kabanzi…
Amathiphu ayi-10 - Ukunakekela izitshalo zasendlini ehlobo
Amathiphu ayi-10 - Ukunakekela izitshalo zasendlini ehlobo Ihlobo liyashintshashintsha futhi amazinga okushisa ayakhuphuka. Kufudumele kithi, kodwa nasezitshalweni zendlu endlini yakho. Ku Funda kabanzi…
Ingabe udinga ulwazi olwengeziwe ngathi?
I-STEKJESLETTER.NL (Vakashela nge-aphoyintimenti kuphela) I-Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp, NL
Sithumelele umlayezo we-LiveChat
24/7 Ukusekelwa kokuthengisa kwe-LiveChat
UDEAL / Ikhadi lesikweletu / PayPal / Apple Pay / ING Home'Pay / bancontact / KBC - CBC / I-Belfius Direct Net / I-SOFORT Banking / I-Giropay / I-EPS / Ukudluliselwa 24
Igama lakho (elidingekayo)
Ikheli lakho le-imeyili (liyadingeka)
Ingabe nawe usilandele ku-Instagram
Yebo! Waziwa phakathi kwabathandi bezitshalo njengomunye we
Bheka lo doll wengane Oluhlaza u-Homalomena Emerald Gem o
Kunjani ukunakekela le ntombazanyana ebizwa ngokuthi iRed Secre
Ingabe ufuna i-Easter gi engcono kakhulu esimeme
I Rare Monstera Siltepecana unrooted cutting has
I-Philodendron Florida Ghost ayiyona into engavamile
INDABA YEMPUMELELO - Ukwabelana wukunakekela i-Ph
I-Crassula Pyramidalis iyindawo enhle yaseCrassula
I-Dracaena, ebizwa nangokuthi i-Dragon Tree, i-bec
Enye ye-Syngonium efunwa kakhulu okwamanje
Ngempela ama-rareplants amangalisayo awo wonke ama-alocasias !!! Kakade
I-Peperomia Caperata iyindlu ejabulisayo nenemibalabala
Layisha okuningi... Landela ku-Instagram
by ukusika incwadi 3 izinyanga ezedlule
Wake wasibona isitshalo esihle esingavamile njengale Painted Pink Lady? Philodendron Painted -Pink - Lady is a
I-Platycerium ijwayele ukubizwa ngokuthi i-Staghorn noma i-Elkhorn Fern (isiDashi: i-Hertshoorn fern) ngenxa yamaqabunga awo amangalisayo, ayingqayizivele, amise okwe-antler. bona
Izitshalo ze-Epipremnum pinnatum zitholakala ezindaweni eziningi emhlabeni jikelele, njenge-China, Taiwan, Japan, India, Malaysia, Northern Australia, noma
I-Tillandsia - Evame ukubizwa ngokuthi ama-airplants, lezi zinhlobonhlobo ze-botanical curiosities zingatholakala emahlathini, emahlathini emvula noma ogwadule - kusukela.
I-Anthurium Clarinervium - Babygal, kuthiwani ngalokho, cutie!? I-Anthurium clarinervium inephethini ethokozisayo yemithambo emikhulu, ewugqinsi,
Ingabe nawe uhlushwa izinambuzane ezinenkani endlini? Well Pokon Bio Against Stubborn Insects Polysect Spray ukulwa a
Amagatsha e-Mitsumata abukeka emuhle eyedwa ku-vase ende noma ehlanganiswe nezimbali ezomisiwe. Ungenza okuningi
Ubuwazi ukuthi uma i-Orchid noma i-Phalaenopsis isiqedile ukuqhakaza, ungayikhuthaza ukuthi iphinde iqhakaze
I-Peperomia Caperata iyisitshalo sasendlini esijabulisayo futhi esimibalabala esingakhuli ngaphezu kwamasentimitha angama-20. Lezi zakhiwo zisho
Ngempela ama-rareplants amangalisayo awo wonke ama-alocasias !!! I-Alocasia Scalprum inamaqabunga awugqinsi futhi ayirabha anomoya oyinkimbinkimbi, angawo
Enye yezinto ezifisa kakhulu i-Syngonium okwamanje i-Red spot tricolor Lezi zitshalo zithanda
I-Dracaena, ebizwa nangokuthi i-Dragon Tree, iya ngokuya ithandwa futhi isewuhlobo lwezitshalo ezinhle. Isitshalo
I-Crassula Pyramidalis iwuhlobo oluhle lweCrassula enamaqabunga amahle. Lezi zikhula eduze kakhulu komunye nomunye futhi zinikeza
by ukusika incwadi 2 izinyanga ezedlule
INDABA YEMPUMELELO - Ukwabelana ukunakekela iqabunga lengane lePhilodendron Florida Ghost elinikeza injabulo enkulu nokuzethemba.
I-Philodendron Florida Ghost akusona nje isitshalo sendlu esiyivelakancane esingaqoqwa, singamaqabunga amise okwesimanga.
I-Rare Monstera Siltepecana ukusika okungagxiliwe kunamaqabunga amahle esiliva anamaqabunga amnyama amnyama. Perfect for ukulenga amabhodwe noma
Ingabe ufuna izipho zePhasika ezizinzile ukuze umangaze ozakwenu? Khona-ke lesi sivumelwano sephakheji lezipho zePhasika si
by ukusika incwadi Inyanga engu-1 edlule
Kuthiwani ngokunakekela le ntombazanyana ebizwa ngokuthi Imfihlo Ebomvu yomndeni we-Alocasia? Imfihlo Ebomvu idinga inhlabathi edonsa kahle, lokhu kuqinisekisa
by ukusika incwadi 4 amaviki edlule
Bheka lo nodoli wengane Oluhlaza u-Homalomena I-Emerald Gem Uphumile Ingabe akayena nje umntwana omncane othandekayo okufanele amnakekele? i
by ukusika incwadi Ezinsukwini ezingu-2 ezedlule
Yebo! Waziwa phakathi kwabathandi bezitshalo njengomunye wama-Alocasia amahle kakhulu kulesi sitshalo
Silandele nasezinkundleni zokuxhumana
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-86
Isevisi yamakhasimende enhle !!!
Ukulethwa okuhle 🪴🪴 futhi kupakishwe kahle, isevisi enhle, impendulo esheshayo embuzweni wami. Sincoma ngempela
Uthole ukusikwa okuhle, ngijabule ngakho!
UWillemijn De Jong - van den Berg
Enyangeni edlule ngithenge i-Syngonium Mottled kanye ne-Syngonium variegata lapha. Uma kuqhathaniswa nabanye abaningi... izingosi lezi bezishibhe kakhulu. Bafike kahle futhi benza kahle kakhulu kusukela ngaleso sikhathi. Ngijabule kakhulu ngakho!funda kabanzi
U-Iris van den Driesschen
Ngifake i-oda lami lokuqala kuleli sonto. Ngangesaba ukuthi ngeke ifike ngesikhathi, kodwa ngemva kokuxhumana... webshop bangiqinisekise ukuthi i-oda lami lizothunyelwa ngokushesha futhi kwaba njalo! Ngithole i-oda lami ezinsukwini ezimbili futhi ukusika bekukuhle kakhulu kunalokho ebengikucabanga! Ukuxhumana ne-webshop nakho bekumnandi kakhulu. Impela ngizobe ngi-oda lapha kaningi!funda kabanzi
U-Riwanna van der Galien
Ngisanda kuthola i-oda lami nge-Syngonium Green Splash. Yeka isitshalo esihle. Izimpawu emaqabunga zinhle nakakhulu... empilweni yangempela-ke ukuthi babukeka kanjani esithombeni esikuwebhusayithi. Ikhasimende elijabule ngempelafunda kabanzi
Isevisi enhle! I-oda lafika ngokushesha okukhulu futhi lapakishwa kahle kakhulu! Futhi njengoba isimanga, isitshalo kakade in a... imbiza 👌🏻funda kabanzi
Ngijabule kakhulu ngokuthi ngithole isitolo sabo njengoba bengibheka izitshalo ezikhethekile. Ngithenge lezi ezinhle kakhulu... izitshalo ezivela kubo futhi ngeneliseke kakhulu ngenkonzo yabo. Izitshalo zifike zihlelekile futhi zipakishwe kahle kakhulu. Bangeze i-Anthurium encane eyengeziwe njengoba le engiyithengile ifike inamaqabunga amathathu kuphela. Leso senzo sasimnandi futhi sangenza ngezwa sengathi bawazisa ngempela amakhasimende abo. Ngemuva kokuthenga kwami, ngizithole sengiphequlula izitshalo zabo eziningi kuwebhusayithi yabo. Abanikazi nabo babengeneka kakhulu futhi benobungane. Kuhle ngempela ukuba nezingxoxo ezinobungane nezicabangelayo.funda kabanzi
UJill Jumanca Franken
insizakalo enhle kakhulu futhi esheshayo. ukubhukuda bekukukhulu kunalokho obekulindelwe. Kunconywa ngempela !!
Ukungaqondi kahle nokulethwa, kuxazululwe phakathi nosuku. Phezulu! Ikhwalithi enhle futhi ilethwa ngokushesha.
Uthenge i-vermiculite. Umkhiqizo omuhle wokuqala izitshalo entwasahlobo/ehlobo. Ukulethwa okusheshayo. Ukupakisha kahle. I... ngijabule! Ngiyabonga Cutieletter!funda kabanzi
Isitshalo safika sisesimweni esihle! Ukulethwa okunobungane futhi okusheshayo😍
Bengilindele isitshalo esingu 40 cm, awekho amafriyi emitha elilodwa namabhamuza angama 40 cm 😇 kodwa ngeke ungizwe ngikhononda!!... Ngijabule kakhulu ngayofunda kabanzi
Kunconywe kakhulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Uzokwaziswa kusukela ekucutshungulweni kuya ekuthunyelweni. Amazinga okushisa ayenjalo... imnene kodwa ifike iphekhi lokushisa ukuze uqiniseke. Ukulethwa kwakungakusasa! Konke kwakupakishwe ngobunono nangokuvikelekile. Ngakho konke sekufike kahle! Izitshalo zibukeka zizinhle futhi zinempilo! Kunconyiwe! Kuze kube ngokulandelayo!funda kabanzi
Okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu, abantu abahle kakhulu futhi abawusizo! Hlola kahle emva kwenyanga engu-1 ukuthi izitshalo ziqhuba kanjani, futhi... lokho kuhle kakhulu. Ukubhukuda kwami ​​akuzange kungihambe kahle, savumelana ngokuthi ngizoyithola ene-oda lami elilandelayo, kunjalo nje. Futhi ngamangala ngithole ama-cuttings angu-2 anezimpande!funda kabanzi
Isipiliyoni sokuqala esihle kakhulu. Imboni yami ibigcwele kahle futhi ifike isesimweni esihle. Lokhu ngokuqinisekile ngeke kube okokugcina... isikhathi engi-oda lapha.funda kabanzi
Ngenze i-oda lami lokuqala. Izitshalo zamukelwe ngobunono. Naphezu kokubambezeleka kokulethwa, kusenempilo futhi... izitshalo ezijabulisayo! funda kabanzi
Ngijabule kakhulu ngendodakazi yami emhlophe ye-philodendron ilethwe kahle futhi ngokushesha
Ngifake i-oda lapha okokuqala ngqa kuwebhusayithi engingayazi. Futhi wow konke kwahamba kahle... kanye! Ukucubungula okusheshayo kwe-oda futhi kuhlanganiswe kahle. Uma into ethengiwe ingahlangabezani nezimfuneko zayo, ngeke ithunyelwe. Super! Waneliseke kakhulu! Nakanjani ngizo-oda lapha futhi! Ngiyabonga!funda kabanzi
Esikhathini esedlule nga-oda lapha futhi izitshalo zisasebenza kahle :) Isevisi nayo yinhle ngempela... . Isitshalo esisodwa safika sonakele futhi sabe sesibuyiselwa emuva!funda kabanzi
USyl de Snoo
Muva nje ngi-ode i-philodendron Verrucosum, isitshalo sami engisithandayo 🥰 ukulethwa kubambezeleke kakhulu ngakho ngakhathazeka... ezinye izinkathazo, kodwa ngenhlanhla kuvele ukuthi kugcwele kahle kakhulu! Ngakho-ke ngemva kwezinsuku ezi-4 ubude kunokuhlelwa ngokudabukisayo ebhokisini, kwaphuma isitshalo esihle esigcwele. Ngangijabule ngempela, futhi manje isibonakala ngokugqamile endlini yami 🥰funda kabanzi
Okuhlangenwe nakho okuhle! Ukulethwa kwakushesha kakhulu futhi ukusikwa kwafika esimweni esihle. Abantu baseCutting letter ba... futhi, kuhle kakhulu! Nakanjani bancome! †funda kabanzi
Uthole isitshalo esihle kakhulu. Ngibe nemibuzo eminingana kusengaphambili, futhi nginobungane kakhulu futhi ngiyashesha ukuyiphendula... wema. Kunconywe kakhulu! funda kabanzi
Ukukhetha okuhle kwezitshalo ongakutholi kalula lokho esitolo esingadini esijwayelekile. Izitshalo engizi-odile zafika ngokushesha... futhi apakishwe kahle impela. I-oda lokuqala kodwa ngizophinda ngi-ode uma ngidinga okuluhlaza okwengeziwe endlini!😄funda kabanzi
Isevisi yamakhasimende enhle ngempela! Sincoma kakhulu lesi sitolo.
Emasontweni ambalwa edlule ngi-ode i-Philodendronwhiteprincess esitolo sakho se-inthanethi. Yafika isesimweni esihle eJalimane... futhi iyisikhangeli samehlo esincane ngempela…🪴🤩 isitshalo senza kahle futhi sengivele ngifuna abanye abanobuhle abancane abasha esitolo sakho :) wenza umsebenzi omuhle kakhulu! Sanibonani eJalimanefunda kabanzi
Ngisanda kufaka i-oda, lafika ngaphambi kwesikhathi ebesilindelwe. Isimanga esihle esengeziwe, sigcwele ngokucophelela!
Kungokwesibili uku-oda lapha. Izitshalo ezipakishwe kahle futhi ezinhle!
I-spagnum moss i-odwe, yapakishwa kahle futhi yathunyelwa ngokushesha!
Ngithole isitshalo esihle kwa-Cuttingsbrief. Nakuba umthumeli wayebambezeleke isikhathi eside ukulethwa, isitshalo safika... enhle futhi ekugcineni konke kwahamba kahle. Isitshalo sasigcwele kahle. Ukuxhumana okuhle kakhulu nochwepheshe nomthengisi. Impela i-eshop ehamba phambili engiyaziyo.💚☺funda kabanzi
Le webhusayithi iyanconywa nakanjani! Izitshalo zafika zigcwele kahle futhi zisesimweni esihle. Ngaphezu kwalokho, i-... Isevisi yamakhasimende enhle kakhulu, impendulo esheshayo futhi enobungane. Sekukonke iwebhusayithi enhle futhi enhle okungekho lutho ongakhononda ngayo!funda kabanzi
I-Stwkysbrief iyizitshalo zekhwalithi ephezulu nokunakekelwa kwamakhasimende okunomusa kakhulu. Ngiyazisa kakhulu izitshalo zabo ezingavamile ngesikhathi esithengekayo... intengo nezimbiza zabo ezihlukile. UCiao wase-Italy.funda kabanzi
UDana Gillis Goossenaerts
Yebo, impela! Ngangibize iPWP ngase ngingenela umncintiswano wezithombe ngiwine inkosazana epink 🥳 . kube namuhla... bafike besesimweni esihle kakhulu futhi ngijabule ngendlela emangalisayo 👌🤗🤗funda kabanzi
I-oda lami lilethwe ngokushesha futhi ngokwami. Ngiyabonga
Ukulethwa okusheshayo kakhulu! Izitshalo zazisongwe ngokucophelela futhi zisesimweni esiphelele. Kuze kube manje lokhu kungokwami ​​kokuqala... ukuhleleka kwezitshalo kule sayithi futhi ngingakuqinisekisa ukuthi ngeke kube okokugcina kwami. Income ngokuphelele! funda kabanzi
ithole inkosazana emhlophe enhle kakhulu enamaqabunga enyanga engu-2 kanye neqabunga elisha. Ngeshwa, iqabunga... Iphenduke yaba nsundu, kodwa ngicabanga ukuthi lokho kungase kube ngenxa yomswakama wasekhaya. (40%)funda kabanzi
Isevisi yamakhasimende enobuchwepheshe kakhulu, emangalisayo futhi yonke into ifike ngesikhathi futhi isesimweni esihle kakhulu! Ncoma ngokuphelele... yonafunda kabanzi
Isevisi esheshayo nebushelelezi, ukukhetha okuningi kwezitshalo nokunye okunjalo
Isevisi yamakhasimende egcwele ewusizo kakhulu. I-oda lami lifike ngokushesha okukhulu futhi lisesimweni esihle. Waneliseke kakhulu futhi uzobuya maduze... oda kanye!funda kabanzi
UMonica Von Vert
Ngibe nolwazi olungcono kakhulu lwesevisi yamakhasimende ngalesi sitolo. USteffie akaphendulanga nje kuphela imibuzo yami ngesivinini esincane... kodwa futhi ungeze elinye izwe kimi njengenketho yokuthunyelwa uma ngibuza. Steffie ngiyabonga ngalokho! Izitshalo zisesimweni esihle kakhulu futhi sezivele zidubula amaqabunga amasha. Yonke into ibigcwele kahle futhi kunenketho yokwengeza iphakethe lokushisa elibalulekile phakathi nezinyanga zasebusika. Ngingaluleka nje ukuthi nginganiseli kakhulu ebusika njengoba kungalimaza izitshalo uma lingekho iphakethe lokushisa futhi kuvale inhlabathi kangcono ukuze ingaphumi ebhodweni (yenze kancane kodwa iphakheji yahamba ngomkhombe ambalwa. amazwe futhi akunakwenzeka ukulawula ukuthi iphathwa kanjani yizithunywa). Izitshalo bekuyisipho esimangalisayo kudadewethu futhi yayingekho inketho yoku-oda ezweni engihlala kulo ngaleso sikhathi. Ngibonga uSteffie manje sengingakwazi ukuzi-oda okuthile :) Banokukhetha okuhle kwezitshalo ngobukhulu obuhlukahlukene futhi ngamanani amahle kangaka. Bengifuna ikakhulukazi inkosazana emhlophe nepinki futhi banazo zombili. Futhi ama-monster ahlukahlukene, ama-cuttings nezitshalo ze-variegated. Izitshalo zinempilo kakhulu futhi sezivele zikhula amaqabunga amasha. Akubanga khona ukubambezeleka ngeposi futhi bengithola ama-imeyili anezibuyekezo ezivela esitolo. Ngijabule kakhulu futhi ikakhulukazi ngomsebenzi wabo omuhle wamakhasimende!funda kabanzi
Ufake i-oda ngeSonto eledlule. Balethwe ngoLwesihlanu. Izitshalo zibukeka zizinhle futhi zinempilo!
I-odwe kabili futhi ijabule kakhulu ngakho kokubili. Ukuthunyelwa okusheshayo, impendulo enobungane futhi yinhle... Imikhiqizo.funda kabanzi
Ukunikezwa okukhethekile okuphezulu futhi kuyathengeka kakhulu. Ukulethwa kwakushesha futhi izitshalo zazizinhle futhi zizikhudlwana kunokulindelekile! Kakhulu... ngijabule ngokuthenga kwami ​​futhi ngizophinda ngi-ode.funda kabanzi
Ukuthunyelwa okusheshayo futhi kupakishwe kahle! Ngijabule kakhulu nge-oda lami futhi ngizo-oda nakanjani esikhathini esizayo!
Ngimangazwe ikhwalithi yalokhu kusikwa nezitshalo ezincane, ezikhudlwana kunalokho ebengikulindele futhi... Sengilifakile i-oda lesibili. Ukuxhumana okuhle nomthengisi, amanani alungile kakhulu futhi ngokusobala uthando oluningi lwezitshalo.funda kabanzi
Siyabonga ngezitshalo ezinhle. Ngiyabonga kakhulu ngomklomelo omuhle engivunyelwe ukuwunqoba (Philodendron... Pinnatipartita, Philenderon Minima, Hoya Kerri). Ngiyayithanda isevisi yakho kanye nendlela oxhumana ngayo. Kuqale ngokuthintana nge-imeyili, njengoba bekubanda impela ngaphandle emasontweni ambalwa edlule, ngikuthumelele i-imeyili uma ufuna ukuthumela inkosazana yami emhlophe lapho isimo sezulu sisincono. Ngithole impendulo emnandi ngalokhu. Ukuxhumana kamuva nge-Instagram mayelana nezitshalo eziwinile bekukuhle. Yeka abantu abahle obaqashayo. Ngamafuphi, ngiyazi ukuthi ngizowathenga kuphi ama-cuttings ami nezitshalo esikhathini esizayo. Ngiyabonga kakhulu ngakho konke. I-10 plus enkulu yesevisi yakho enhle, izitshalo ezinhle, ukuxhumana kanye nabantu abamnandi kakhulu abakusebenzelayo.funda kabanzi
Konke kwahamba njengoba kwakuthenjisiwe nezitshalo zafika zisesimweni esihle! Izo-oda nakanjani futhi.
Ngaqala ukusika izitshalo zami ngoNovemba, futhi ngasheshe ngaba nezinkinga ngomiyane ongapheli. Ngemva kwami... Ukuze ngixazulule inkinga ngokuzimela ekuqaleni, ekugcineni ngivumile ukulahlekelwa kwami ​​ngesikhathi segagasi lesithathu/lesine lomiyane ngabe sengiyala i-Pokon ngokumelene Nezinambuzane Ezinenkani. Umkhiqizo u-odwe ngeSonto ekuseni, futhi ngokungalindelekile wafika ntambama. Ngokushesha umkhankaso counterattack, futhi kusukela lapho abazange babone omiyane ophilayo. Ukulethwa okuphezulu! Bekufanele ngisheshe. Incwadi ye-Cuttings inokusikwa okuthakazelisayo futhi ukuxhumana/ukulethwa kumnandi, ngakho-ke ngizobuya nakanjani.funda kabanzi
Ngiyi-novice plug. Encwadini yokusika ngayala ibhokisi lokusika le-monster elinezimpande. Ngokushesha futhi kucocekile... ukulethwa. Okuwukuphela kwento engangingayithanda njengepulaki ye-novice ukuthi izitshalo zazibhalwe ngamagama futhi kube nencazelo encane mayelana nokunakekela izitshalo. Nokho, ngisizwa kahle ngokusika incwadi nge-Instagram.funda kabanzi
Isitshalo esihle kakhulu nesinempilo! Ipakishwe kahle futhi ukulethwa kanye nesevisi nakho bekusezingeni eliphezulu 👌🏼. Enhle kakhulu... uhla lwezitshalo ngamanani akhokhelekayo! Ngingumlandeli futhi ngiyithanda ngokuphelele inkosazana yami emhlophe ye-philodendron 🥰!funda kabanzi
Isevisi enhle kakhulu! I-odwe ngoLwesithathu futhi isivele ilethwe ngoLwesine! Ukusika kwakupakishwe ngokucophelela ukuze kube... ngokuqinisekile yayingenakonakala endleleni. Futhi ukuzisika ngokwakho kubukeka kukuhle kakhulu!funda kabanzi
Ngithenge le Monstera Variegata enhle kwaStekjesbrief. Kukhulu futhi kunempilo. Kwapakishwa kahle kwafika... ngokuphepha. Ithunyelwe ngoLwesibili ebusuku, ngathola ithrekhi nomkhondo, futhi isitshalo sathunyelwa eDenmark ngoLwesihlanu emini. Ngincoma kakhulu i-Stekjesbrief, ibe yinhle kakhulu ekunikezeni izeluleko kanye nenkonzo enhle yamakhasimende. Ngizothenga izitshalo kuwe futhi.funda kabanzi
amabhodwe amahle kakhulu nezitshalo ezinhle.ezifikayo ezinhle.zinconyiwe! nakanjani zizo-oda futhi.
Ithole izitshalo nezitshalo ezinhle kakhulu! Futhi kupakishwe kahle kakhulu, izitshalo zeza kahle njengoba zingonakalisiwe... ngaphakathi (ngisho kulawa mazinga okushisa abandayo) Waneliseke kakhulu! Izophinda i-oda maduze!funda kabanzi
Kuhle ngempela! Bengidinga i-spagnum ngokushesha ngangokunokwenzeka, futhi ngakubonisa lokhu, futhi cishe ngokushesha ngemva kokukhokha... Ngathola impendulo yokuthi i-oakket yayizohamba ngalolo suku ukuze ingene ngaphambi kwempelasonto! Futhi waphumelela! :D isindise isitshalo sami ngakho ngiyajabula :) ukuxhumana nokwenza kulula futhi kumnandi ngempela!funda kabanzi
Ngingancoma lesi sitolo sezitshalo kuphela! Izitshalo zipakishwe kahle kakhulu nangokucophelela. Ikhwalithi enhle kakhulu futhi.... Kodwa engikuthanda kakhulu abantu abasemuva kwenkampani: ukuxhumana okuhle kakhulu futhi bahlala bekulungele! Umlandeli! Ngincoma kakhulu lesi sitolo! Izitshalo zigcwele ngokucophelela, futhi zinhle futhi zisezingeni eliphezulu. Kodwa engikuthanda kakhulu, abantu ngemuva kwesitolo: bahle kakhulu futhi banobungane, futhi bahlale bezimisele ukusiza! A+++funda kabanzi
Ngithenge i-monster variegata yami lapha. Ufike kahle kakhulu !!! Ngemva kwezinsuku ezimbalwa wayeselenzile entsha... splash 😍 Isevisi enhle kakhulu!funda kabanzi
Izitshalo ezinobungani kakhulu, ezinhle ngentengo enhle futhi zihlala zipakishwe kahle! Kunconyiwe!
Ngi-ode izitshalo ezi-3 e-Italy. Bafika ngokushesha futhi bapakishe kahle. Izintengo ezinhle kakhulu nokuphendula okusheshayo. Kunconyiwe... :)funda kabanzi
Ngisaphila kakhulu ngezitshalo zami ezinhle. Isevisi enhle futhi! Umthengisi opholile kakhulu! Kunconywe kakhulu
URebecca van Aerschot
I-assortment enhle nokulethwa okusheshayo! Isevisi yamakhasimende esheshayo futhi enhle!
Thanda lesi sitolo. Abantu abanenhliziyo enomusa nje abake baba khona. Ngaso sonke isikhathi ufuna ukuhleka futhi uxoxe futhi ube nezintengo ezithembekile zabo... isitshalo. Uyazi nje ukuthi bakuyo uthando lwezitshalo. Kwesinye isikhathi baletha izinto zomuntu siqu lapha eNetherlands 🥰.funda kabanzi
Ithole izitshalo ezinhle nezisikiwe ngoLwesithathu olwedlule. Ipakishwe kahle kakhulu futhi isevisi isezingeni eliphezulu!... Nakanjani Kunconywa kulabo abafuna futhi ukusikwa okuhle kakhulu! Kunoma yikuphi, ngizo-oda kwa-Stekjesbrief kaningi.funda kabanzi
Ngijabule kakhulu ngakho konke engikuthenge lapha. Izitshalo zafika ziphephile futhi zipakishwe kahle. I... isilinganiso senani lekhwalithi muhle kakhulu. Ukunikezwa kubanzi. Balalela kahle kakhulu impendulo/lokho ikhasimende elingathanda ukukubona esitolo. Ukuxhumana kuyashesha, kuvulekile futhi kucacile. Futhi ngijabule kakhulu ngazo zonke izimbiza engizithenge lapha! Izo-oda nakanjani okuningi kusuka lapha ngokuzayo. Kunconyiwe!🌿 Izimbiza ezimibalabala ezithombeni zivela e-Stekjesbrief. I-Hedera futhi.funda kabanzi
Zipakishwe kahle, zathunyelwa ngokushesha, zathintwa ngezitshalo ezingasatholakali futhi zasizwa ngokushintshwa... izitshalo ongakhetha kuzofunda kabanzi
Kade ngifuna inkosazana ephinki enhle nethengekayo i-Philodendron nenkosazana emhlophe uPhilodendron. Ngokusebenzisa... Ku-instagram ukuthungatha okuningi kwe-webshop enhle ngafika ekusikeni incwadi. Ngokungena kusizindalwazi futhi ngicele ulwazi.. Lapho ngabingelelwa ngobungane kakhulu nangendlela enesizotha. Uthole i-Philodendron pp ngosuku olufanayo! Izithombe zathembisa okuningi, kodwa lapho zifika phakathi nosuku nesigamu. (Ipakishwe kahle.) Ngajabula kakhulu. Ngokungabaza imizuzu emi-5, ngokushesha nga-oda inkosazana emhlophe yasePhilodendron. Futhi ngingacabanga ngegama elilodwa kuphela.. wow.! Hewu. Ngijabule kakhulu ngobungane bekhasimende. Isevisi esheshayo nenhle kakhulu! Izo-oda izitshalo ezengeziwe lapha. Kunconyiwe.!! Ungangabazi.!! Lokhu kunesevisi enhle kakhulu yamakhasimende futhi kuthunyelwa ngokushesha nangokucocekile * ungangeza iphekhi lokushisa ngesikhathi esibandayo. Okwami ​​kwakusafudumele lapho izitshalo zami zifika. Siyabonga futhi ngosizo lwakho. insizakalo yekhasimende. futhi ikakhulukazi izitshalo zakho ezinhle.funda kabanzi
Isitolo sewebhu esiphezulu ngempela sezitshalo! Ukuthunyelwa okusheshayo (usuku olungu-1 kuphela endleleni eya e-Belgium) kanye nekhwalithi enhle kubo... Amanani. Izimpande zazo zombili izitshalo zase zivele ziphume ebhodweni! Ithiphu elincane: mhlawumbe unganikeza inketho yokuhambisa ngephakethe lokushisa ebusika? Izitshalo zibe nomonakalo omncane lapho zifika ngenxa yamazinga okushisa abandayo (isithwathwa ebusuku), kodwa bekufanele ngilindele ukuthi 😄 nganeliseke kakhulu, nakanjani ngizo-oda lapha futhi, futhi ngincome lesi sitolo ngo-100%!funda kabanzi
Ngathola i-oda lami ngalo lolo suku! Ngokushesha kakhulu futhi plant akulimalanga nhlobo kusukela zilethe ngokwabo kimi... indawo. Bonke abasebenzi banomusa kakhulu, bayasiza futhi bahle ngokweqiniso. Kalula ngaba isitolo sami sewebhu esiyintandokazi sezitshalo!🌿🌙 Isibuyekezo: i-oda lami lesibili futhi ubheke le pinnatipartita enhle! izitshalo ezinhle kanye nokulethwa okusheshayo nokunobungane ngokumangalisayo futhi. inkulisa yami yezitshalo engiyithandayo🥰funda kabanzi
Waneliseke kakhulu ngokuthengwa kwe-Monstera albo borsgiana variegata cutting. Ngagcinwa kahle futhi... uma uthola ukusikwa kusesimweni esihle kakhulu. Inani elikhulu lezimpande ukuze lihambisane ngokushesha nomfowabo omkhulu. Waneliseke kakhulu!funda kabanzi
Isevisi enhle, izitshalo ezinhle, ezinconyiwe!
Izitshalo ezinhle, kanye nenkonzo enhle. Ngijabule kakhulu ukuthi ngithole incwadi yokusika.. ngeke zisangilahlekela
Ukuthunyelwa okusheshayo nezitshalo kufike kahle. Ngiyabonga!
U-Karina Den Oudsten - van der Graaf
Ukuthunyelwa okusheshayo nokucophelelayo, ngijabule kakhulu ngakho 😊
Nakuba i-oda lami lokuqala lalahleka ngenxa yenkampani yeposi engadalulwanga, uTamara kanye... Uhlamvu olusikiwe olugoqa kahle kakhulu futhi lusheleleke ngomusa. I-oda elisha lifike lisezingeni eliphezulu. Kunconyiwe.funda kabanzi
Izitshalo ezinhle ngenani elihle, zithunyelwa ngokushesha, zipakishwe ngokucophelela. 10 amaphuzu kwa 10!
Ngibe nolwazi oluhle ngempela nge-Cutting Letter! 👍 I-oda elivela e-Austria, Izitshalo zifike zisesimweni esihle. UTamara yena... kuwusizo kakhulu! funda kabanzi
UTamara wayewusizo kakhulu! Bengifuna ukuthenga izitshalo kodwa azizange zithunyelwe e-UK. UTamara usize ukuhlela ukuthunyelwa kwemikhumbi, futhi... izitshalo zafika ngokucophelela zigcwele izinto ezigaywa kabusha! Manje sebeya e-UK futhi ngingabancoma kakhulu ☺️funda kabanzi
I-oda lami lokuqala elethwa ngobunono eBelgium ezinsukwini ezimbalwa. Kupakishwe kahle kakhulu, ama-cuttings nezitshalo... aphume ebhokisini engenamyocu. Kufanelekile ukuphinda, ngiyabonga!funda kabanzi
I-odwe ngoLwesibili futhi yamukelwe namuhla (ngoMgqibelo). Kamuva ngenxa yokugcwala kwabantu ePostNL ngenxa yeCorona. bheka... ubukeka umuhle futhi unempilo futhi uzo-oda kaningi nge-Stekjesbrief!funda kabanzi
Ukulethwa okusheshayo nezitshalo ezipakishwe kahle kakhulu! Izitshalo nazo zazingabizi futhi zibukeka ziphelele! Cha... umonakalo noma izimbungulu! Ngingancoma ukusika incwadi kuwo wonke umuntu!funda kabanzi
Ngi-ode izitshalo eziningi kuwe ngesonto eledlule futhi ngifuna ukukwazisa ukuthi ngijabule kakhulu ngakho 🥰... insizakalo enhle kakhulu, epakishwe kahle futhi enenani elihle ngempela ngentengo 💁🏼‍♀️funda kabanzi
Isevisi ephezulu kanye nokulethwa okusheshayo. Izitshalo zinhle kakhulu. Ngijabule kakhulu ngakho.
I-odwe izolo kusihlwa. Futhi izolo ku! Yeka umnqobi! Siyajabula. †
Izitshalo zinhle futhi zinakekelwa kahle 💚 Ngincoma nakanjani incwadi yokusika! Hlalani niphephile nonke
Kuhle kangakanani uku-oda isitshalo ku-inthanethi? 🤩 Abantu abathandekayo bezinhlamvu ezisika baletha izitshalo ezinhle ezivela kuzo... encane kuya enkulu futhi kusukela ezitshalweni ezindala kuya cuttings! 🌱 Azopakishwa ngobunono ukuze avikeleke ngesikhathi sokuthutha 🚚 Aphinde alethwe anomswakama ukuze akwazi ukuhlala ebhokisini izinsuku ezimbalwa, uma kwenzeka alala eposini! Nakanjani Kunconywa uku-oda!funda kabanzi
Ukuthunyelwa okusheshayo, nezitshalo ezinhle, ezinempilo! Yize behlala ePostNL impelasonto yonke, babheka... kusekuhle, kupakishwe kahle futhi inhlabathi inomswakama. Kunconyiwe! funda kabanzi
Copyright © 2022 I-STEKJESLETTER.NL
Sisebenzisa amakhukhi ukuze sivumele ukusebenza kwewebhusayithi kanye nokuqonda ukusebenza kwesayithi lethu. Uyavumelana namakhukhi ethu ngokuqhubeka nokusebenzisa iwebhusayithi yethu. Izilungiselelo zamakhukhiNgiyavuma
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho njengoba uzulazula kuwebhusayithi. Kulawa makhukhi, amakhukhi ahlukaniswe ngokudingekayo agcinwa esipheqululini sakho njengoba abalulekile ukuze imisebenzi eyisisekelo yewebhusayithi isebenze. Futhi sisebenzisa amakhukhi ezinkampani zangaphandle asisiza ukuba sihlaziye futhi siqonde ukuthi uyisebenzisa kanjani le webhusayithi. Lawa makhukhi agcinwa kuphela esipheqululini sakho ngemvume yakho. Futhi unenketho yokuphuma kulawa makhukhi. Nokho, ukuphuma kwamanye alawa makhukhi kungase kube nomthelela ekuphequluleni kwakho.
Amakhukhi adingekayo abaluleke kakhulu ekusebenzeni kahle kwewebhusayithi. Lesi sigaba siqukethe kuphela amakhukhi aqinisekisa imisebenzi eyisisekelo nezici zokuphepha zewebhusayithi. Lawa makhukhi awagcini noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu.
Uhlu lokulinda - Uhlu lokulinda Sizokwazisa uma umkhiqizo usesitokweni. Sicela ufake ikheli le-imeyili elivumelekile ngezansi.
ngithumele i-imeyili uma ikhona